Akụkọ - Na - emetụta ọnụahịa na - arị elu nke ihe eji arụ ọrụ, ọnụahịa ngwaahịa ga - ebili!
Emetụta site ịrị elu price nke ngwaọrụ, ngwaahịa price ga-ebili!
Dabere na data nke National Bureau of Statistics of China wepụtara taa, na mbido Eprel 2021, ma e jiri ya tụnyere mbubreyo Machị, ọnụ ahịa ahịa nke ụzọ 50 dị mkpa iji mepụta ihe na ngwaahịa 27 na mpaghara mgbasa mba ebilila. N'ime ha, ọnụahịa nke igwe abawanyela.
Dabere na data nke Iron na Steel Association nyochaa, na ngwụsị nke Machị, nrịgo ọnụahịa ngwaahịa ogologo bụ 142.76, mmụba nke 5.78% kwa ọnwa, yana akara ọnụahịa efere bụ 141.83 isi, ihe mmụba nke 8.13% ọnwa n'ọnwa. Site na mmụba nke ọnụahịa nchara, akụ na-elekọta mmadụ nke nchara nọgidere na-ada. Ka ọnwa nke asatọ nke ọnwa Eprel dị, nchịkọta mmekọrịta ọha na eze nke ngwaahịa ise ndị buru ibu ruru nde 18.84, nke na-agbadata maka izu ise na-esote.
Steelgwè na aluminom bụ ihe ndị bụ isi maka imepụta shelf, ubube na trolleys. Mmụba nke akụrụngwa ahịa na-abawanye ụgwọ ọrụ anyị. A na-atụ anya na ngwaahịa anyị ga-abawanye na ọnụ ahịa site na mbubreyo Eprel.
Angang na-ebuli 750 RMB / ton
Iwu ọnụahịa ngwaahịa Angang na Mee 2021:
1. rollgbagharị na-ekpo ọkụ: Ọnụahịa ahụ bụ RMB 500 / ton.
2. icktụkọta: Ọnụahịa ahụ ga-ebuli RMB 500 / ton.
3. Oyi Rolling: The price na-bilitere site RMB 400 / ton.
4. rollgbagharị siri ike: Ọnụahịa ga-ebuli RMB 400 / ton.
5. Galvanizing: Ọnụahịa ahụ ga-ebuli RMB 200 / ton.
6. Ngwunye silicon na-enweghị mgbatị: obere ọkwa dị larịị, ọnụahịa dị elu dị elu site na 300 RMB / ton.
7. entedgwè silicon gbakwasara ụkwụ: A na-akwụ ụgwọ ahụ site na RMB 100 / ton.
8. Ihe mkpuchi agba: A ga-ebuli ụgwọ ahụ site na RMB 100 / ton.
9. Ọkara na efere dị arọ: A na-ebuli ụgwọ a site na RMB 750 / ton.
10. Ogwe waya: Ọnụahịa ahụ bụ RMB 200 / ton.
11. Rebar: Ọnụahịa ahụ na-ebuli RMB 400 / ton.
Ihe owuwu Shagang bilitere 200 RMB / ton
Shagang gbanwere ọnụahịa ụlọ ọrụ mbụ nke ụfọdụ ngwaahịa:
1. Mee ka rebar bawanye site na 200 RMB / ton: ugwo ugwo nke mm16-25mmHRB400 bu 5250 RMB / ton, ugwo nke Φ10mmHRB400 bu 5410 RMB / ton, ugwo nke Φ12mmHRB400 bu 5350 RMB / ton, ugwo ugwo nke Φ14mmHRB400 bụ 5280 RMB / ton, Φ28- Ọnụ ego ogbugbu nke 32mmHRB400 bụ 5,310 RMB / ton, ọnụego mmegbu nke Φ36-40mmHRB400 bụ 5500 RMB / ton, ọnụahịa mmezu nke Φ16-25mmHRB500 bụ 5550 RMB / ton, na ọnụahịa mmegbu nke Φ16-25mmHRB400E bụ 5280 RMB / ton;
2. A na-amụba eju disk site na 200 RMB / ton: ọnụahịa igbu nke Φ8mmHRB400 bụ 5350 RMB / ton, ọnụego igbu nke Φ6mmHRB400 bụ 5650 RMB / ton, na ọnụego mmegbu nke Φ8mmHRB400E bụ 5380 RMB / ton;
3. Ngbanwe mgbanwe dị elu bụ 200 RMB / ton: ọnụahịa igbu nke Φ8mmHPB300 akara dị elu bụ 5260 RMB / ton.
Shagang Yongxing bilitere 200 RMB / ton
Shagang Yongxing gbanwere ọnụahịa ụlọ ọrụ nke ụfọdụ ngwaahịa:
1. Mụbara carbon Ọdịdị ígwè site 200 RMB / ton: The price nke mm28-32mm 45 # carbon Ọdịdị ígwè bụ 5230 RMB / ton.
2. General RMB mụbara site na 200 RMB / ton: Φ28-32mm Q355B General RMB executed price was 5380 RMB / ton.
3. Gbasara 200 RMB / ton maka igwe mejupụtara: Ọnụ ego igbu nke Φ28-32mm 40Cr nchara bụ 5450 RMB / ton.
Huaigang na-ebuli 60 RMB / ton
Huaigang agbanweela ọnụahịa ụlọ ọrụ ụfọdụ nke ngwaahịa ụfọdụ:
1. Dịkwuo price nke carbon Ọdịdị ígwè site 60 RMB / ton: Φ29-55mm 45 # carbon Ọdịdị ígwè nwere Executive price nke 5680 RMB / ton.
2. Ọnụahịa nke igwe mejupụtara ga-ebuli site na 60 RMB / ton: ọnụahịa igbu nke Φ29-55mm 40Cr nchara ga-abụ 5920 RMB / ton.
3. A ga-ebuli billet tube a na-ekpo ọkụ site na 60 RMB / ton: ọnụahịa igbu nke Φ50-85mm 20 # a na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ ga-abụ 5700 RMB / ton.
4. Ntanye ígwè site na 60 RMB / ton: Ọnụ ego ndị isi nke Φ29-55mm 20CrMnTi gear bụ 6050 RMB / ton.
5. Chromium-molybdenum nchara bu 60 RMB / ton na-ebulite: ego nke Φ29-55mm 20CrMo chromium-molybdenum nchara bu 6250 RMB / ton
Ihe ndị a bụ nkwuputa akụkọ kachasị ọhụrụ sitere na MetalMiner nke ụbọchị Eprel 15, 2021:
Ezigbo ndị njikwa ịzụta, biko tinye iwu ozugbo enwere ike. Biko jụọ ajụjụ info@abctoolsmfg.com 0086- (0) 532-83186388
Shelf maka ulo Mpempe akwụkwọ nchekwa edo edo Ogbe shelf Ngalaba Na-ahụ Maka Azụmaahịa Obere Nchekwa Obere Ime ụlọ ime ụlọ